६७ वर्षका ‘भजन सम्राट’ अनूप जलोटाले गरे ३० वर्षीया मोडल जसलीनसँग विवाह ? फोटो भाइरल – Sanjal Nepal
Homeसमाचार६७ वर्षका ‘भजन सम्राट’ अनूप जलोटाले गरे ३० वर्षीया मोडल जसलीनसँग विवाह ? फोटो भाइरल
February 8, 2021 admin समाचार 1262
एजेन्सी / भारतमा भजन सम्राट भनिने अनुप जलोटा र मोडल–नायिका जसलीन मथारुका केही तस्बिर सोसल मिडियामा भाइरल भइरहेका छन् । यी तस्बिरमा अनुप शेरवानीमा सजिएका छन् भने जसलीन मथारु पनि दुलहीको रुपमा सजिएकी छिन् । दुबै बेहुला–बेहुलीको पहिरनमा छन् । तस्बिर हेर्दा यस्तो लाग्छ कि यसलाई घरभित्रै खिचिएको छ ।
स्मरण रहोस् टिभीको सबैभन्दा वि’वादास्पद शो बिग बस सिजन १२ मा प्रतिस्पर्धी रहेका अनूप जलोटा र जसलिन मथारुको त्यतिबेला निकै चर्चा भएको थियो । यी दुई पार्टनरको रुपमा कार्यक्रममा आएका थिए र दुबैको प्रेमको कथा निकै चर्चामा आएको थियो ।यद्यपि, कार्यक्रमबाट बाहिरिएपछि उनीहरुले आफूहरु कुनै पनि प्रकारको सम्बन्धमा नरहेको बताएका थिए । दुबैले आफूहरुबीच गुरु र शिष्यको मात्र सम्बन्ध रहेको बताएका छन् ।
भाइरल भइरहेको तस्बिरमा अनूप र जसलिनको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै स्पष्टिकरण आएको छैन । तसर्थ, दुबैले साँच्चैको विवाह गरेका हुन् वा यो ‘सस्तो पब्लिसिटी स्टन्ट’ हो, यकिन हुन सकेको छैन ।अनूप जलोटाले तीन विवाह गरेका छन् । उनकी जेठी श्रीमतीको नाम सोनाली सेठ थियो । उनी पनि व्यावसायिक रुपमा गायिका थिइन् । दुबैले सँगै थुप्रै प्रस्तुती पनि दिएका थिए । उनीहरुले अनूपको परिवारको सहमति बिना विवाह गरेका थिए । पछि उनीहरुको स’म्बन्धविच्छे’द भएको थियो ।
बिना भाटियासँग अनूपले दोस्रो विवाह गरेका थिए । तर यो सम्बन्ध पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन । त्यसपछि अनूपले तेस्रो विवाह मेघा गुजरालसँग गरे । मेघा निर्देशक शेखर कपूरकी जेठी श्रीमती र पूर्व पीएम आईका गुजरालकी भाञ्जी थिइन् ।अनूपले इजराइली मोडल रिना गोलनलाई डेट गरिसकेको पनि खबर छ । रिनाले एउटा किताब लेखेकी थिइन् ‘डियर मिस्टर बलिउड’ । यसमा उनले अनूप जलोटासँग भेटघाट र सम्बन्धबारे बयान गरेकी थिइन् ।
November 23, 2020 admin समाचार 2269
एजेन्सी । एक व्यक्ति पेट्रोल पम्पमा बोतमा पेट्रोल लिन जाँदा उनलाई अस्विकार गरियो । रिसमा फन्किएर गएपछि उनी पुनः उक्त पेट्रोल पम्पमा फिर्ता भए त्यतिबेला उनको हातमा तीनवट डब्बा थियो, त्यसभित्र विषालु सर्प । पम्मकी
November 2, 2020 admin समाचार 5073
कस्तो अचम्म,आफ्ना श्रीमानले स’न्तु’ष्टि दिन नसकेपछि प्रहरी चौकी पुगिन् यी महिला
December 10, 2020 admin समाचार 8230
काठमाडौं । हामीले कहिलेकाँही त्यस्ता घटनाहरु देख्छौँ जुन सहजै विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । यस्तै एउटा घटना भारतको उत्तर प्रदेश प्रहरीकहाँ आइपुगेको छ । यो घटनालाई प्रहरीले कसरी समाधान गर्ला भन्ने बुझ्न मुस्किल रहेको छ
LEX 18 agenda conversation: Job club (541100)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (511624)
Hello world! (433296)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (395856)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (103994)